मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको गृहकार्य, अर्थमन्त्रीमा नारायणकाजीको सम्भावना – BikashNews
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको गृहकार्य, अर्थमन्त्रीमा नारायणकाजीको सम्भावना
२०७६ माघ १२ गते १०:३७ विकासन्युज
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको, उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहम्फेलाई मन्त्री पद लिने भनेर उपसभामुखबाट राजीनामा गराएको, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिन लागेको र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पनि सरकारमा सहभागी हुन तयार देखिएको परिस्थितिका कारण मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको गृहकार्य चलेको हो ।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका लागि प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग केही चरण छलफल पनि गरेका छन् । यस्तो छलफलमा कसकसलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने भन्ने टुंगो लागिनसकेको भएपनि केही नेता दुबै अध्यक्षको रोजाईमा परेका स्रोतले बताएको छ ।
समाजवादी पार्टीले छोडेका कानुन र शहरी विकास मन्त्रालय राजपालाई दिने तयारी सत्तारुढ नेकपाको छ । तर, राजपाले थप अर्काे मन्त्रालय पनि मागेका कारण केही ढिलाई भएको बताइन्छ ।
यस्तै, उपसभामुखबाट राजीनामा दिएकी डा. तुम्बाहम्फेलाई पनि मन्त्री बनाउने सहमति दुबै अध्यक्षको छ । तर, उपसभामुखबाट राजीनामा गर्ने वित्तिकै मन्त्री बन्दा आफूलाई पदलोलुपको आरोप लाग्ने भन्दै तुम्बाहम्फेले केही समय मन्त्री नबनाउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरेकी स्रोतको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको २० फागुनदेखि संसद पदको कार्यकाल सकिदैछ । तर, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उनी फेरि राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने सम्भावना भने छ । डा. खतिवडाले राट्रियसभा सदस्य भएर आएको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयकै जिम्मेवारी पाउने हो भने पनि मन्त्रीमा पुनःनियुक्ति हुनुपर्नेछ ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी नारायणकाजी श्रेष्ठले पाउने संकेतहरु पनि देखिएका छन् । श्रेष्ठले राष्ट्रियसभामा विजयी हुनेवित्तिकै अब आर्थिक क्रान्तिमा केन्द्रीत हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । श्रेष्ठको यो प्रतिक्रियालाई धेरैले उनको अर्थमन्त्रालयको दाबेदारीको रुपमा लिएका छन् ।
गोर्खा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेका श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने नेकपाको निर्णय नै उनलाई थप जिम्मेवारी दिनका लागि हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । राष्ट्रियसभाको सदस्यले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी लिन नपाउने भएकोले उनलाई अर्थ र उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन लागिएको स्रोतको दाबी छ ।
जगदम्बा समूहका सुलभ अग्रवाल पक्राउ, ४ हजारकाे थर्मलगन १५ हजारमा बेचेकाे आराेप
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीलाई १ हजार ५०० भत्ता वृद्धि, अरुलाई गफ मात्र
आउने २ साता हाम्रा लागि चुनौतिपूर्ण हुन सक्छन्ः प्रधानमन्त्री (सम्बोधनको पूर्णपाठ)
आउने दुई हप्ता हाम्रा लागि थप चुनौतीपूर्ण छ: प्रधानमन्त्री ओली
आपूर्ति मन्त्री भट्टको लकडाउन दैनिकीको परिणामः व्यापारी खुसी, उपभोक्ता झनै खुसी
कोरोनाका बिरामीलाई आईसीयूमा राख्नुको मतलव के हो ?